Autographed စာအုပ် Giveaway! | Martech Zone
Autographed စာအုပ် Giveaway!
တနင်္လာနေ့, ဧပြီ 23, 2007 Douglas Karr
ဒီနေ့ငါလက်ခံရရှိတယ် ခရစ် Baggott ရဲ့စာအုပ် မေးလ်ထဲမှာ woohoo!
ဒီတော့ဒီမှာသဘောတူညီချက်ပါ! ဤစာစောင်ရှိစာအုပ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ခရစ်၏စာအုပ်မိတ္တူတစ်ခုကိုဝယ်ပါ။ Kiss သီအိုရီကောင်းသောနုတ်ဆက်ပါတယ်, ပထမ ဦး ဆုံးလူ3ရန် ငါ့ကိုအတည်ပြုချက် link ကိုပေးပို့ပါ သူတို့စာအုပ်ဝယ်ယူခဲ့သည်။ စာအုပ်တွေ ကိုယ်တိုင်ရေးလက်မှတ် ဘော့ Prosen ကိုယ်တော်တိုင်အားဖြင့်!
ငါစာအုပ်ဖတ်ရှုဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ ခရစ်ကတည်းကလမ်းပေါ်မှာဖြစ်ခဲ့သည် သူ့ကုမ္ပဏီ ကမ္ဘာအနှံ့ရှိအီးမေးလ်စျေးကွက်များမှစတင်သင်ယူခြင်း။ ယုံမှားစရာမရှိစာအုပ်ဖြစ်လိမ့်မည် သာ Email Marketing တွင်ဖတ်ရန်ထိုက်တန်သောစာအုပ်!
ခရစ်သည်သူငယ်ချင်းဖြစ်ပြီးဆရာဖြစ်သည်။ သူကပွင့်လင်းရိုးသားတယ်၊ ခရစ်နှင့်ကျွန်ုပ်သည်သူ၏ကုမ္ပဏီသို့ဝင်သောအခါအလျင်အမြန်မိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ပြီးသူသည်သူ၏လုပ်ငန်းသစ်အတွက်ထွက်ခွာသောအခါကျွန်ုပ်သည်ကွဲခဲ့သည် (သို့သော်သူကကျွန်ုပ်ကိုကျွန်ုပ်၏အားပေးမှုဖြစ်သည်ကိုသူသိသည်!) ။
ငါစာအုပ်ထဲမှာရှိတယ်! ခရစ်တောင်းခဲ့တဲ့အလိုအလျောက်ပေါင်းစည်းခြင်းဆိုင်ရာစာအုပ်မှာကြီးစွာသောအပိုင်းရှိတယ် Amol Dalvi နှင့်ငါအပေါ်တုံ့ပြန်ချက်များကို။ ဒါကြောင့်ထွက်စစ်ကြည့်ပါ ... ငါကျနော်တို့အပေါ်အချို့သောအကြီးအအကွံဉာဏျထားပါတယ်ထင်ပါတယ် APIs များကို…အီးမေးလ်စျေးကွက်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊
ငါသည်လည်း Kiss သီအိုရီကောင်းသောနုတ်ဆက်မှု၏ 4th ကိုယ်တိုင်ရေးလက်မှတ်ကိုမိတ္တူရှိသည် Engtechသူနေထိုင်ခဲ့သည့်စာအုပ်မိတ္တူကိုရှာ။ မရသောဤဘလော့ဂ်ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာဖတ်ရှုခဲ့သူ (၎င်းသည်လာမည့်အပတ်တွင်အီးမေးလ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ Eng)
စာရေးသူကိုယ်တိုင်မှတ်တမ်းတင်ထားသောသူ၏မိတ္တူများပေးပို့ခြင်းအတွက် Bob Prosen အားအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည် ငါ၏အပြန်လည်သုံးသပ်ဖတ်နေ။ ငါသူ့အလုပ်မှာနှင့်သူငယ်ချင်းများကိုသူ၏စာအုပ်တဝိုက်ဖြတ်သန်းခဲ့ကြရတယ်! ၎င်းသည်မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းနှင့်မဆိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေမည့်ခေါင်းဆောင်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းဗျူဟာများအကြောင်းစိတ်ကူးကောင်းသည့်စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်သည်။
ဧပြီ 24, 2007 မှာ 1: 31 pm တွင်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Doug, ဖတ်ရှုဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။
Randy Forbes မဂ္ဂဇင်း
ဧပြီ 25, 2007 မှာ 7: 48 AM
ခရစ်ဝင်စာအုပ်အသစ်၊ အထူးသဖြင့်နာမည်ကျော်ကြားမှုကဏ္ your သို့ဝင်ရောက်ရန်ကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါတယ်။
ငါကတစ်ခြား Borders မှာနေတုန်း Kiss Theory Goodbye ရဲ့အခန်းနှစ်ခန်းကိုဖတ်ဖို့အခွင့်အရေးရခဲ့တယ်။